အလင်းရောင်ကြယ်များ: February 2012
ချစ်လှစွာသော မိခင်ကြီးရဲ့ ဗုဒ္ဒဂါယာ ခရီး
ချစ်လှစွာသော မိခင်ကြီးရဲ့ တသက်မျတခါ မျော်လင့်ရောက်ခဲ့ ရသော
အမေဟာ ဘဝပေါင်းများစွာကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီး သား ယခုဘလောက်ပိုင်ရှင် ကလောင်အမည် ကျနော်ဂေါ်လီကို ယခုလိုနိင်ငံခြား မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ယင်း အင်တာနက် ကွန်ပျူတာလိုင်းပေါ်ထိရောက်အောင် အမေ့ ရဲ့ နှလုံးသားမေတ္တာ ဆောင်ရွက်ကောင်းမှု့ တွေပါပဲ ။ကောင်းမွန်စွာ အိမ်ထောင်ချပေးပြီး ဘဝမျိုးဆက်သစ်တခုကိုလည်း အမေဖန်တီးပေးတယ်။
အမေဟာ အဖေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာကျောခိုင်းပြီးတဲ့နောက် သူ့ ဘဝရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အေးငြိမ်းတဲ့ လမ်းစကို ရှာဖွေပြီး ခုချိန်ထိ ဆုပ်ကိုင်ကျင့် သုံးပျော်မွေ့ နေတယ် မစားမသောက်ရလည်း ပျော်မွေ့ နေတယ်။
အမေဓမ္မာစကြာ ဝတ်ရွတ်တယ် ။ရပ်ကွက်ထဲမှာဆို ။အမေကြီုးစားမှု့ ဟာ ခုဆိုယင် နံပါတ်၂ကဏ္ဍကနေ ။အကြီးကဲနေရာပါ သာရေး နာရေး ဝါတွင်ချိန်တိုင်းရော အမေ့ ရဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းက ဝတ်ရွတ်သံဟာ ။အဆိုတော်တင်တင်မြ လိုပဲ။လွှင့် ပျံနေဆဲပါ နာမည်ကြီး ကိုကျော်သူတို့ နာရေးကူညီမှု့အသင်းကအမေတို့အဖွဲ့ ကို အထူးအားကိုး အသိမှတ်ပြုနေရသူပါ။
ကျနော်ဟာ ဆင်းရဲတဲ့ ဘဝပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းလာရပြီး ခုချိန်အမေကိုကျေးဇူးဆပ်နေဆဲပါ။ မိဘရဲ့ ကျေးဇူးကိုအမြဲ ယောင်ပြန်ဟတ်နေ၇လို့ လားပဲလို့ယူဆမိပါတယ်။ ကျနော်ဟာ သေဘေးတွေ အကြိမ်ကြိမ် နည်းမျုံစုံ ရက်ရက်စက်စက်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ ပွန်းယုံပဲ့ရှယုံ ကလွဲလို့ ခုချိန်ထိရှင်သန်လွတ်မြောက် ပြီးမရှိတုန်းခန ။သာမာန်ဘဝနဲ့ပူပင်သောကဝေးခဲ့တယ်။ ဗေဒင်ဆရာတွေ မျက်လုံးပျူးသွားစေရမဲ့အာယုခေါ် အသက်လမ်းကြောင်းကို မြင်ချင်လို့မနည်းကို မှန်ဘီလူးနဲ့ အတင်းကြည့် ရတဲ့ လူသားပါ။ကျနော်ဘဝမှာ မလုပ်ဘူးတာဆို မရှိသလောက်ပဲ။မှုးယစ်ဆေးဝါး လာခဲ့အကုန်လုပ်ဘူးတယ် အလောင်းကစားလာခဲ့တပ်ပြီးသား။လက်မှု့ ပညာ ယခင်ကအီလက်ထရောနစ်ညာရှင် ကြေးစာပါ။ခုတော့ ဆောက်လုပ်ရေးသံဂဟေနဲ့ဘဝကိုမြုတ်နှံလိုက်ပြီ။အားယင်ဝါသနာအရ ။ပါဏာတိပါတာပေါ့ငါးများတယ်။ကွန်ပျူတာကလိမယ်။ဘလောက်ရေးမယ်။စာရေးဆရာနဲ့ပန်းချီကာတွန်းကို အရမ်းCRAZY ဝါနာထုံတယ်။…ကျနော်ဆွဲထားတဲ့ကာတွန်း ကလေးကို ကျနော့် ဘလောက်ပို့ စ် ထဲမှာရှိပါတယ် ရှာဖတ်ပါ (ဖေ့စ်ဘုတ်+ဂျီတော)ကာတွန်းပါ…
အမေကြောင်းဆက်ရအောင် ….ကျနော့် ၇င်ထဲမှာအမေ့ ကို မြတ်စွာဘုရားပွင့် တဲ့နေရာကြီး အန္ဒိယနိုင်ငံ ။ဗုဒ္ဒဂါယာကို ရောက်စေခြင်တယ် သွားစေချင်တယ်။ငယ်စဉ် ထဲက သွားစေခြင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ တဖွဲဖွဲ။အမေ့ ကိုတိုက်တွန်း ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ကုန်ကျမည့် ဥစ္စာငွေကျေး အင်အားခက်ခဲရပ်တည်၇င်ဆိုင်ရသေးတယ်
၂၀၁၁ အကုန်မှာကျနော်ဟာ တနေကုန်ပင်ပန်းကြီးစွာ နဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ နေပူရိပ်ခိုစရာ မနည်းရှာနေရာတဲ့ နေရာမှာ အပေါ်ပူ အောက်ပူ သံဂဟေဆော်နေခိုက် အမေ့ ထံမှဖုန်းသံဝင်လာတယ်..အင်တာနက်ဆိုင်ကခေါ်နေတော့အတော်ပဲ…အမေဖုန်းပြန်ချလိုက်ပါ သားပြန်ခေါ်မယ်
ချက်ချင်းပဲ ပါလာတဲ့ လက်တော့ နဲ့ VZO လိုင်းပြန်ချိတ်ပြီး အမေဘာဖြစ်လို့ လည်း????မေးကြည့် လိုက်ရာ…..
သားလေးရေ အမေတော့ပါတ်စပို့ အခုယူပြီး ပြန်လာတာ နောက်၎ရက်ဆို ၊ဗုဒ္ဒဂါယာ ကိုဘုရားဖူးထွက်ပြီတဲ့ ဘုရားဖူးအဖွဲ့ နဲ့ ၂ပါတ်တဲ့ ။၉သိန်းပေးရတယ်စာရိတ်ငြိမ်းပါ။တဲ့ ကျနော်ဘယ်လို ပျော်သွားတယ်ဆိုတာ ပီတိကို နှလုံးသားခြင်းဆက်နွယ်နေတဲ့ အမေကသိနေတယ်၊အမေကျမ္မာစွာနဲ့ အောင်မြင်စွာရောက်ပါစေလို့ ၊သမာဒေဝနတ်ကောင်းမြတ်တို့ အား၊လက်အုပ်ချီဆုတောင်းမီတယ်….အမေဆန္ဒပေါင်းများစွာ တို့ နှင့် အောင်မြင်သောခရီးကို ရောက်ခဲ့ပါပြီ……
……………. ကျနော့်လိုလူလတ်ပိုင်းတွေ ၊ကိုဆရာလုပ်တာတော့ ။မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိညီငယ်တွေကိုလည်း ယောက်ကျားဆိုတာ ဘာမဆို အထိုက်လျောက်လေ့ သိတပ်လေ့ လာဘူးရမယ်။ ကောင်းတာဆိုးတာကို မိမိဘဝနဲ့ရပ်တည်ချင့် ချိန်ပြီး ။မကောင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းကို -မိဘကရော။နိုင်ငံတော်ကပါ ဆုံးမပေးမှ---နောင်တရတဲ့ ယောက်ကျားမျိုး၊မဖြစ်စေဘို့ ၊
ဟာအဖေမေတို့ကလည်းဗျာ---ယောက်ကျားစောက်ဂရုမစိုက်ဘူး ထောင်ကိုခြင်ထောင်ပဲ ငွေရှိယင်-လွယ်လွယ်လေး ဆိုတဲ့နည်းစကားကြီးကို -ကျနော်တို့ညီကိုယ်တို့(လုင်္းဝ)စိတ်ကူးထဲတောင် ထည်ူမတွေးစေချင်ပါဘူး၊ဒီနေ့ ကျနော်တို့ မျော်လင့် နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုရတော့ မဲ့ အချိန်ပိုင်းကိုစောင့် နေယင်း။အမိနိုင်ငံတော်ကြီး စံချိန်မှီ အမြန်တိုးတက်ဘို့ ။မိမိတပ်သော အတပ်ပညာ ဘွဲ့ ထူးဂုဏ်ဆောင် ထမင်းစားလက်မှတ် ကိုယ်စီနဲ့ ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ကျနော်ဂေါ်လီ အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဟစ်ကြွေးလိုက်ယင်း…
မိဘရဲ့ မေတ္တာရောင်ပြန် အရိပ်ဟာ အင်မတန်အစွမ်းထက်ပါတယ်၊
တောင်းစုတ် အဝတ်စုတ် စွန့် ပြစ်နိုင်ငြား။သားသမီးဆိုးမပြစ်ပါယ်နိုင်ပါ၊
စိမ်ရေမသင့် သော။သားကောင်းသမီးဖြစ်ဘို့အမှားရှိယင်ပြင် ။ဆင်ယင်ကြပါစို့ 
ဆန်ကုန်မြေလေး၊ကုန်အိမ်သတိ ဘွဲ့ ကြီတော့ ၊ဝေးဝေးရှောင်။
ကျနော်ဂေါ်လီရဲ့ ၊ကိုယ်တိုင်ရေးကိုတွေ့ မှတ်တမ်းပါ စာရေးသားတိုက်ဆိုင်မှု့ ချစ်ညီကိုယ်ညီမ များတို့ မှာ ညှိစွန်းခဲ့ယင် ခွင့် လွတ်ပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/18/2012 01:00:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Gmail ကို လုံခြုံရေး နည်းလမ်းတခု
မြန်မာ့ ရိုးရာ ဆေးမီးတို(၁)